Lahatsary Gafin’ny “Fifandonan’ny Riba” Navoakan’ny Vondrona Eoropeana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2012 4:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, 日本語, srpski, Português, русский, Dansk, Français
Nisy lahatsary natao ho an'ny tanora efa lehibe nangala-tahaka ny sarimihetsika Kill Bill ary miompana amin'ny “fifandonan'ny riba” nataon'ny Vondrona Eoropeana entina hivelaran'ny Firaisambe Eoropeana. Saingy nesorina ny lahatsary ny 6 Marsa 2012 rehefa niteraka adihevitra mafana noho ny fiampangana azy ho mampiroborobo ny fanavakavaham-bolonkoditra.
Tsy nahasakana intsony ny adihevitra mamaivay teo amin'ny bolongana sy ny tambajotra an-tserasera anefa izany fanesorana azy izany. Tamin'ny fotoana nanoratana dia mbola hita tao amin'ny Daily Motion [fr] sy ny YouTube ny lahatsary:
Notantarain'ny tranonkalam-baovao 24heures.ch [fr] antsipiriany ny lahatsary:
Tanora vehivavy fotsy hoditra mahatonga anao hieritreritra an'i Uma Thurman ao amin'ny sarimihetsik'i Quentin Tarantino Kill Bill no mijoro hifanandrina amina lehilahy telo tonga ao amin'ny fitoeran'entana midadasika misy azy. Ny iray hita ho avy any Azia, ilay hafa avy any India ary ny farany avy any Brezila. Eoropa miatrika ny hery (firenena) mihamisongadina ve? Maherihery fihetsika izy ireo raha manakipy ny masony kosa ravehivavy ka nizara maromaro ka lasa nanao faribolana nanodidina ireo mpiady izay nivadika ho hendry tahaka ny ondry tampoka teo. Mifarana amin'ny lohahevitra tahaka izao ilay lahatsary tsy noheverina tsara: “Araka ny mahamaro antsika no mampatanjaka antsika”. Fa mialoha io filazana io ireo vehivavy nanao faribolana dia nivadika ho sarin-kintana mandrafitra sy sainan'ny Firaisambe Eoropeana rehefa nojerena avy eny ambony.
Toy izao ny lazain'ny tranokala:
Ny tsy mampino amin'ity tantara ity dia mety ho maro ny mpiasam-panjakana ambony tao Brussels no tsy mahita izay manohintohina ao amin'ny sary. Raha hita an-tserasera tany amin'ny tranokalam-baovao ity lahatsary ity omaly dia nesorina ny folakandro ary dia nofoananany fanentanana.
Ny takelaka Facebook [fr] avy amin'ny Parti des Indigènes de la République nanatsonga lahatsoratra avy amin'ny Regards.fr [fr], ilay “anti-kapitalista mivoaka isam-bolana “:
Mahavariana ity sarimihetsika fohy ity, feno fomba fihevitra mpanavakavaka, nosainina sy noforonina ary dia navoaka an-tserasera ny Zoma 2 Marsa, noho ireo mpitati-baovaon'ny delegasiona ankapoben'ny fampivelarana ny Firaisambe Eoropeanan'ny Vaomieran'i Brussels. Noho ny fahatafintohinan'ny olona dia nesorina izy io ny Talata 6 marsa. Fotoana ampy nampalaza azy tamin'ny aterineto, saingy tsy nisy ny gazety, indrindra ny an'ny frantsay, niresaka azy ity.
Hafa kosa ny fomba nandraisan'ny tontolo politika azy. Toa an'i Jean-Patrick Grumberg ao amin'ny dreuz.info [fr]:
Mandainga ilay lahatsary fa tsy manavakava-bolonkoditra. Mandainga satria tsy manao na inona na inona hiarovan-tena amin'ny fananiham-bohitra Islamista i Eoropa fa ny mifanohitra amin'izany aza no hitako, dia ny fandrisihana azy. Tsy mahita an'i Eoropa manao izay hiarovantena amin'ny fifindra-monina Afrikana aho, fa hitako kosa izay ataony handrisihana izany, ary tsy hitako hoe inona ny loza ahiana ho avy any Shina, izay iantsoan'ny mpitondra Eoropeana vonjy hatrany hamenoana vola tsy ampy.
Isan-karazany kosa ny fihetseham-po ao amin'ny Twitter ary matetika no mafana:
@LauraLardy: Mampiroborobo ny adin'ny riba sy ny fanavakavaham-bolonkoditra ny Vondrona Eoropeana….
@sergiomarx: Manavakava-bolonkoditra tokoa ve ny lahatsarin'ny Vondrona Eoropeana? Sa ao amin'ny mason'ny mpijery kosa no misy ny fanavakavaham-bolonkoditra?
Ho lesona ho an'ny mpianatra fifandraisana sy serasera ve ity raharaha ity? Manazava ny teboka lehibe amin'ity “fifandonan'ny fomba fandraisan-kevitra” ity ny bilaogy Décrypter la communication européenne [fr] :
Manamarina ny famoahana ny lahatsary ny filazana ofisialy nosoniavin'ny Tale jeneralin'ny VE ho amin'ny fampivelarana fa nandray tsara ny lahatsary ireo kinendry nampijerena mialoha ny hamoahana azy tamin'ny besinimaro:
“Rakitsary doka, nikendrena ny tanora (16-24) mahalala ny karazam-piokoana (gidraka) amin'ny alalan'ny tambajotra an-tserasera sy mahay ny fanao any amin'ny sarimihetsika sy lalao an-dahatsary manandratra haiady io. Nandray tsara azy ny sokajin'olona kinendry, ary tahaka izany ihany koa vondron'olona nanandramana ny famoahana ny hevitra.”
Ny fehin-kevitry ny bilaogy dia mitovy amin'ny hevitra ankapobe avoakan'ny mpisera Aterineto [fr]:
Na dia nanaiky aza ny Vaomiera Eoropeana fa misy olana ilay lahatsary nampiady hevitra tamin'ny nifidianana ny hanesorana azy ; ny fahasamihafam-pandraisan-kevitra misy eo amin'ny mampita vaovao amin'ny antony nanesorana azy dia mampiseho fa tsy mihaino ny fiampangana ny tsy fieritreretana tsara amin'ny mety handikana ny lahatsary ho mpanavakava-bolonkoditra ny Vaomiera.